Nagu saabsan - Shenzhen Fullux Lighting Technology Co., Ltd.
Iftiinka Iftiinka Caarada
Nalalka Koritaanka Laydhka Laydhka
Nalalka Korriinka Quantum LED
Nalalka Korriinka CREE COB
Iftiinka Korantada ee Iftiimiya
Shenzhen Fullux Laydhka Teknolojiyadda Co., Ltd.waa shirkad hormuud ah oo ku takhasustay Led nalalka ujeedadeeduna tahay inay macaamiisha siiso xal nalalka oo dhammaystiran tan iyo aasaaskii 2014. "gacan ka geyso dhammaanteen awooddeena adduunka oo dhan badbaadinta Tamarta iyo yareynta qiiqa" waa falsafadeena ganacsiga. Iyada oo leh xirfadle R & D, nidaam adag oo tayo leh, adeeg tixgelin leh, waxaan soo saarnay macaamiil caalami ah adduunka oo idil.
Marka loo eego isbeddelada suuqa iyo baahida, Waxaan sare u qaadeynaa oo aan diirada saareynaa nalalka LED-ka koraan tan iyo 2017, waxaan soo saarnay oo aan cusbooneysiinay dhowr taxane oo alaab ah oo loogu talagalay dhir kaladuwan sida qajaar, yaanyo, xashiish iwm, lagu dabaqo meelo kala duwan sida teendhooyinka, weelasha, beeraha, ka kasbaday aqoonsi adeegsadayaasha, si heer sare ah u hagaajiyay goosashada waxayna yareeyeen qiimaha korontada iyo shaqaalaha!
Horumarinta suuqa iyo shuruudaha isticmaaleyaasha, waxaan ku kacnay ku dhowaad 10 bilood si aan u cusbooneysiino SPF Spider LED-ga koritaanka taxanaha iftiinka si uu u noqdo mid otomaatig ah sanadka 2020, wuxuu helay dhowr shati abuurnimo iyo ETL, FCC, IECE, CE, ROHS oggolaansho! Waa hal-abuur caalami ah oo semi-otomaatig ah oo jilicsan oo horseed u ah iftiinka nidaamka xakamaynta DALI iyo nidaamka xakamaynta WIFI ee ikhtiyaariga ah, midab & veg, ubax & ubaxyada ubaxyada sida ku xusan xilliga koritaanka dhirta, si aad ah u yareynaya foosha hagaajinta dhererka iftiinka iyo xoogga & muuqaalka. Dhanka kale waxtarka ayaa gaadhay 3.0umol / J on awoodda ugu badan, runtii kaa caawineysa inaad saameyn ku yeelatid hal-joogsi ka koro dhirta illaa goosashada!
Maaddaama xirfadle LED uu koray alaab-bixiye, dabcan waxaan haynaa naqshad caan ah oo loogu talagalay tafaariiqda internetka sida Amazon, Ebay, oo loo tixgeliyay heerka amniga, saameynta iyo qiimaha, waxaan soo saarnay taxane kale oo patent ah: Kala-baxa ugu qiimaha badan ee wax-ku-oolka ah ayaa horseed u noqday taxanaha iftiinka, UL-ga gudaha ku qoran ee bixiya darawalku wuxuu hubiyaa nabadgelyada, kala-sooc la'aanta bilaa dalabka ah iyadoo loo eegayo baahida qalab la'aan, awood buuxda oo kala duwan oo loogu talagalay ikhtiyaar ahaan iyadoo lala socdo, run ahaantii qiimaha ugu wax-ku-oolsan suuqa dhexdiisa!
Waxaan sidoo kale bixinaa adeegga xalka nalka khuseeya sida dhismaha cusub ee beeraha, casriyaynta beeraha, alaabooyinka loo habeeyo, OEM & ODM waa la soo dhaweynayaa!
"U fududee koritaanka iyo waxtarka badan" waa mabaadi'deenna.
"Noqo Kaaliyahaaga Wax-soosaarka Sare "waa ujeedkeenna.
Waxaan sii wadi doonnaa inaan kuu keenno alaab iyo adeeg ka wanaagsan, waxaan rajeyneynaa iskaashi dhow goor dhow!
Iftiiminta Korantada ee Biyuhu koraan
Gali cinwaanka emaylkaaga si aad u hesho dhacdooyinka ugu dambeeyay ee wararka iyo Birta.